सलमान खानको नजिकी संग अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाको प्रेम , को हुन् ति युबक जसले दबंग सोनाक्षीलाई माया जालमा पारे ? – Jagaran Nepal
सलमान खानको नजिकी संग अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाको प्रेम , को हुन् ति युबक जसले दबंग सोनाक्षीलाई माया जालमा पारे ?
बलिउडकी दबंग अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ३४ बर्षकी भइन्। बलिउड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हाको घरमा २ जून १९८७ मा जन्मेकी सोनाक्षी आज हिन्दी सिनेमा जगतकी एक चर्चित अभिनेत्री हुन्। सन् २०१० मा सलमान खानको फिल्म दबंग बाट आफ्नो करियर शुरू गर्ने सोनाक्षी सिन्हाले अहिले सम्म धेरै हिट फिल्म दिईसकेकी छिन्।
सोनाक्षी सिन्हा र बन्टी सचदेवा को नाम विगत धेरै बर्ष देखि सँगै जोडिएको छ। मानिसहरु विश्वास गर्छन् कि बन्टी र सोनाक्षी एक अर्कालाई डेट गर्दैछन् र यो पनि भनिन्छ कि दुबै चाँडै विवाह गर्न जाँदैछन्। तर सोनाक्षीका फ्यानहरुलाई सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हुनेछ कि उनीहरु कहिले बिहे गर्छन्!
सोनाक्षीका फ्यानहरु उनी चाँडै बसोबास गरेको हेर्न चाहन्छन्। स्रोतहरुका अनुसार उनीहरु दुबैको विवाह २०१७ मा नै हुन लागेको थियो, जुन कुनै कारणले स्थगित भयो। तर अब मिडिया मा रिपोर्टहरु छन् कि दुबै चाँडै सगाई गर्न सक्छन्, जसको मतलब हो कि उनीहरु केहि दिनहरुमा विवाह गर्न सक्छन्।
बन्टी सचदेवा बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका धेरै नजिकका साथी हुन् भनेर सायद धेरैलाई थाहा होला। बन्टी सचदेवा सलमान खानका कान्छा भाई सोहेल खानका बहनोई हुन्। सोनाक्षी सिन्हाका परिवारका सदस्यहरु बन्टी सचदेवालाई पनि धेरै मन पराउँछन् र उनीहरु बन्ती चाहन्छन् कि बन्ती चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नी छोरीको बिहे गरी उसलाई घर लैजानुहोस्।
जानकारी को लागी, हामी तपाइँलाई बताउँछौं कि बंटी सचदेव कोर्नर स्टोन स्पोर्ट्स र मनोरन्जन को मालिक हो। यो उही कम्पनी हो जहाँ दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को पूर्व प्रबंधक दिशा सलिन पनि काम गरे।
सोनाक्षी सिन्हा र बन्टी सचदेवा धेरै पटक सँगै देखिएका छन्। दुई प्राय पार्टीहरु सँगै जान्छन् र एक अर्का संग समय बिताउन मन पराउँछन्। सोनाक्षीले एक पटक एक अन्तर्वार्ता मा बताइन् कि बन्टी सचदेवा संग उनको विवाह पहिले भएको थिएन किनकि उनी यस समयमा आफ्नो स्नातक हुड को आनन्द लिन चाहन्छिन्।
सन् २०१० को फिल्म दबंग बाट बलिउडमा डेब्यू गर्ने सोनाक्षी सिन्हाले यसअघि २००५ मा कस्ट्युम डिजाइनरको रुपमा काम गरिसकेकी थिइन्। वर्ष २०१४ मा, उनले दक्षिण तारा सुपरस्टार रजनीकान्तको फिल्म लिंगा मा काम गरेर आफ्नो तमिल डेब्यू गरे र हालै उनले अजय देवगन संग भुज मा काम गरेर ओटीटी डेब्यू गरे।